दिदीबहिनीको यो जब्बर जोडी : बहिनी मायाको साथले दिदी कमला बनिन् अमेरिकाको उपराष्ट्रपति – bampijhyala.com
Home > अन्तराष्ट्रीय > दिदीबहिनीको यो जब्बर जोडी : बहिनी मायाको साथले दिदी कमला बनिन् अमेरिकाको उपराष्ट्रपति
२३ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:४० bampijhyala
बाँपीझ्याला, अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित हुँदा उनीसँगै कमला ह्यारिस उपराष्ट्रपति चुनिएकी छन्।
कमलालाई विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली देश मानिने अमेरिकाको दोस्रो शक्तिशाली पदमा पुर्‍याउन सो अभियानको सुरुदेखि अन्तसम्म सघाउने एक प्रमुख व्यक्ति थिइन् उनकै बहिनी माया।
कमलाले उम्मेदवार दिएदेखि शनिबार उनको जित सुनिश्चित हुँदासम्म निरन्तर साथ दिने व्यक्ति थिइन् माया।
आफ्नो चुनावी अभियानमा रातदिन खटिएर आफ्नालागि ज्यान दिइरहेका मायाजस्ता निकै कटिबद्ध व्यक्तिहरुप्रति आफू धन्य रहेको कमला बताउँछिन्।
चुनावी अभियानमा मात्र नभई समग्र राजनीतिक यात्रामै पारिवारिक व्यक्तिहरुको साथ सहयोग र आड भरोसाको निकै महत्व रहने गर्छ, जुन अस्वभाविक होइन।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरु जोन एफ. केनेडीलाई उनका भाइ बबी केनेडीको साथ, जर्ज डब्लू. बुसलाई भाइ जेव वुसको साथ र दुवैलाई पिता जर्ज एच.डब्लू.बुसको साथका कारण उनीहरु अमेरिकी राजनीतिमा उदाएका थिए।
जसरी उनीहरुलाई भाइ र पिताले साथ दिए त्यसैगरी अहिले कमलालाई अमेरिकाको उपराष्ट्रपति सम्म बन्नका लागि बहिनी मायाले त्यसैगरी काँध थापेकी थिइन्।
कमलाको चुनावी अभियानको अध्यक्ष नै बनेर शनिबार उनलाई मुकामसम्मै पुर्‍याएकी छन् मायाले। यी दुई दिदीबहिनीको सम्बन्ध र संघर्ष निकै रोचक छ।
बाल्यकालमा कमला र माया
दुई दिदीबहिनी–सँधै साथी
यूसी बर्कलेमा पीएचडी गर्नका लागि भारत छाडेर अमेरिका गएकी स्तन क्यान्सरकी अनुसन्धाता श्यामला गोपालन ह्यारिस र स्ट्यानफोर्डमा पढाउने जमैकन अर्थशास्त्री डोनाल्ड ह्यारिसका सन्तान हुन्- कमला र माया।
जनवरी ३०, १९६७ मा माया जन्मेको केहि वर्षपछि श्यामला र डोनाल्ड छुट्टिए। त्यसपछि कमला र मायालाई श्यामलाले एक्लै हुर्काइन्।
बर्कलेमा अधिकारकर्मीको रुपमा स्थापित हुँदै गरेकी श्यामला जुलुस तथा विरोध प्रदर्शनमा जाँदा पनि आफ्ना साना छोरीहरुलाई आफूसँगै लान थालिन्।
‘मलाई आमाले गुडाएरै त्यस्ता जुलुसहरुमा लिएर जानुहुन्थ्यो र त्यसैले मैले अधिकारका लागि गरिने अभियानहरु बालककालदेखि नै अनुभूति गरेँ,’ कमला भन्छिन्, ‘कहिलेकाहिँ म ठट्टा गर्ने गर्छु- मलाई घेरेर पाका मान्छेहरुले यो जस्टिस (न्याय) भनेर किन चिच्याइरहेका छन्, के मागिरहेका छन् जस्तो लाग्थ्यो।’
त्यसैले गर्दा अधिकारका लागि लड्ने हुटहुटी कमला र मायाको रगतमै छ र अन्यायविरुद्धको आक्रोश उनीहरुको नसा नसामा दौडिरहेको हुन्छ।
बाल्यकालदेखि नै उनीहरुमा देखिएका लक्षणले धेरैलाई अचम्मित पार्ने गरेको थियो।
माया र कमला क्रमशः ८ र १० वर्षका हुँदा उनीहरु आफैले एउटा काम थाले। उनीहरुले आफ्नो घरअगाडि प्रयोगविहीन भएको ठाउँ देखेपछि हामी यो ठाउँलाई खेल्नलायक एउटा राम्रो खेलमैदान बनाउँछौ भने र बनाइछाडे।
त्यसको केहि वर्षपछि श्यामलाले म्याकगिल युनिभर्सिटीमा जागिर पाइन्। त्यसका लागि तीनैजना मन्टरियल पुगे, जहाँ सबैजना फ्रेन्च भाषामात्र बोल्थे। भाषाका कारण अरुसँग घुलमिल हुन नपाएपछि दुई दिदीबहिनीबीच सम्बन्ध झनै गाढा भयो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त, भोलि साढे २ बजे सपथ २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:४०
नेपाली सेनाको टोलीद्वारा आमादब्लम हिमालको सफल आरोहण २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:४०
राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो, प्रधानमन्त्रीमा कसैको दाबी परेन २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:४०
उदाउँदै देशकै ठूलो वाणिज्य बैंक, हिमालय एन्ड इन्भेष्टमेन्ट बैंक २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:४०
१६ वडाको सहयोगमा कुमारीको नयाँ आसन २३ कार्तिक २०७७, आईतवार १५:४०